चिया कवितामा सोनाम दोङको अनुभूतिका चित्रहरू लोकार्पण: कवि सत्ताको प्रशंसामुखी होइन सत्ताको विरोध गरेर दिशा दिनसक्ने हुनुपर्छः प्रा. नवीन पौडेल - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारचिया कवितामा सोनाम दोङको अनुभूतिका चित्रहरू लोकार्पण: कवि सत्ताको प्रशंसामुखी होइन सत्ताको विरोध गरेर दिशा दिनसक्ने हुनुपर्छः प्रा. नवीन पौडेल
चिया कवितामा सोनाम दोङको अनुभूतिका चित्रहरू लोकार्पण: कवि सत्ताको प्रशंसामुखी होइन सत्ताको विरोध गरेर दिशा दिनसक्ने हुनुपर्छः प्रा. नवीन पौडेल
December 30, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार, सिक्किम 0
गान्तोक, 30 दिसम्बर ।
कविताले समाजलाई सही दिशा दिन सकोस र कविमा लेखन प्रतिभा पनि हुनु जरूरी छ जसले सस्तो सत्ताको प्रशंसामुखी होइन, सत्ताको विरोध पनि गर्न सक्ने र दिशा निर्देश दिन सक्ने हुनुपर्छ। यस प्रकारको मन्तव्य चिया कविताको 36 औं प्रकरणमा पर्यवेक्षकको रूपमा उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार तथा पेदोङ महाविद्यालयका प्रभारी प्रा. नवीन पौडेलले व्यक्त गरेका हुन्। जीवन थिङ मार्गस्थित रचना बुक्समा आयोजन हुने चिया कविता कार्यक्रम यो सालको अन्तिम कार्यक्रमको रूपमा रहेको थियो जसमा कवि सोनाम दोङको नयॉं कविता संग्रह ‘अनुभूतिका चित्रहरू’ उपस्थित साहित्यकारहरूले लोकार्पित गरे।
यसका साथै युवा कवि योगेश ग्यावा तामाङको कविता संग्रह कलम’माथि चिया चर्चा राखिएको थियो। आफ्नो कुरा राख्दै पर्यवेक्षे पौडेलले दार्जीलिङ र​ सिक्किमको कविता लेखनको धारलाई सानो टिस्टाको सीमानाले छेक्न नसकेकै कारण मूल अन्तर नरहेको, तर दुवै क्षेत्रमा गौन अन्तर भने रहेको बताए। उनले अहिले तत्कालिकतालाई कवितामा उतार्ने काम अधिक मात्रामा हुने गरेको, तर लामो समयसम्म बाच्ने शाश्वत प्रकारको कविता लेखनमा जोड दिनुपर्ने बताए। स्थानीय चित्रणहरूसितै मूल स्वरको रूपमा रहेको केन्द्र र छेउको विभेद वर्तमान नेपाली कविताको स्वर रहीआएको पनि अवगत गराए। उनले कविताको धर्म सत्ता प्रशंसामुखी नभएर सत्तालाई विरोध गर्दै दिशा निर्देश गर्न सक्ने आॅंट भएको काव्य सिर्जनाको वकालती गरे। उनले समग्रमा भारतेली नेपाली कविता अहिले आएर पाठकमुखी र पठनीय पनि बन्दै गएको दाबी गरे।
कवि सोनाम दोङले आफ्नो तेस्रो कृति अनुभूतिका चित्रहरू—बारे कुरा राख्दै भने, मैले अनुभव गरेकै कुराहरूलाई कवितात्मक चित्रमा संकलित गरेको उपज हो यो कविता संग्रह। जसलाई उनले आफ्नै समाजबाट टिपेका र भोगेका कुराहरू समाजलाई नै देखाइदिने काम गरेको बताए। पेशाले पुलिसकर्मी भए पनि कोमल भावनाले छुने गरेको कुरालाई काव्य र साहित्यमा उतार्ने काम गरेको यद्यपि पेशा प्रतिकूल अडचनहरू भने आएको भने उल्लेख गराए।
उनले संकलनबाट कविता सुनाए भने हिन्दीमा अनुवाद कविता पनि पाठ गरेका थिए। यसैगरि युवा कवि युवा ग्यावा तामाङको कविता कृति कलम—माथि कवि दीपा राईले चिया चर्चामा कुरा राख्दै मुख्य रूपमा दार्जीलिङ्गे आन्दोलनकाललाई परिभाषित गर्ने ढॉंचामा कविता लेखिएको बताइन्। यसैगरि कविता संग्रहभरि मूल स्वरको रूपमा जातीय अस्मिता र गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको छॅंटा व्याप्त रहेको बताउॅंदै धेरै कविताहरू कलिला रहेको तर भविष्यको निम्ति प्रशस्त सम्भावना बोकेको बताइन्।
कार्यक्रममा मास्टर मित्र सेन थापाको सम्झाना गर्दै देव कुमार दुमीले संक्षिप्त जीवनी पाठ गरेका थिए। यसैगरि उषा शर्मा, लुइस विष्ट, , चुन्निलाल घिमिरे, श्याम प्रधान, दीपा राईले हिन्दी र नेपालीमा कविता पाठ गरेका थिए। यसका साथै अहिलेसम्मको चिया कविताको विभिन्न प्रकरणहरूमा गरिएको कार्य र साहित्यिक गतिविधिबारे पनि अवगत गराइएको थियो।
गोजमुमो शाखा समितिहरूको गठन